सत्य निरुपणः न्याय पाउने आशामा उजुरीको ओइरो
आयोगले परेका उजुरीको प्रारम्भिक चरणमा द्वन्द्वकालको घटना भएकाले आवश्यक प्रमाण पुगे÷नपुगेको अध्ययन गर्नेछ । प्रमाण नपुगेका र आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र नपरेकालाई तामेलीमा राखेर काम अघि बढाउने तयारी गरेको छ । “हत्याको कति ? विस्थापितको कति ? सम्पति कब्जाको कति ? पहिलो चरणमा छुट्याउने काम गरिन्छ, त्यसपछि दोस्रो चरणका अनुसन्धानमा पुग्छौँ”, आयोगका सदस्य मञ्चला झाले भन्नुभयो ।
आँखा रसाएको रुकुमको कहालिलाग्दो घटना आयोगका सदस्य झाले सुनाउनुभयो । तत्कालीन द्वन्द्वमा एक महिलाका श्रीमान्लाई दुई टुक्रा पारेर मारिदिएछन् । आफ्नै आँखाअगाडि टाउको एकातिर र शरीर अर्कोतिर भएकोे बिलौना गर्दै उहाँले सुनाउनुभयो । “त्यो महिलाको वेदना सुनेर म आफूले आफँैलाई थाम्न सकिनँ, आँसु झ¥यो,” उहाँले भन्नुभयो ।